အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: Sustainable History of Tall Building
ထို စကားလုံးလေးနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေခဲ့သော အချိန်အတိုင်းအတာသည် သိပ်မကြာမြင့်သေး။ ဤကျွန်းနိုင်ငံ သေးသေးလေးသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီးမှလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ Garden City အဖြစ်မှ City in the Garden အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနေသော ဤကျွန်းနိုင်ငံငယ်လေးတွင်တော့ ထိုစကားလုံး၏ အသံသည် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်ရှိလွန်းလှသည်။ Garden City နှင့် City in the Garden ဆိုသော စကားစုနှစ်ခုသည် အဓိပ္ပါယ်ကွာခြားလွန်းလှသည်။ တည်ဆောက်ရသော အချိန်ကာလတို့လည်း ကြာညောင်းလှသည်။ ရုပ်ဝတ္ထုကမ္ဘာကို ပြောင်းလဲရန် ကြိုးစားနေခြင်းထက် လူသားတို့၏ နားလည်လက်ခံနိုင်စွမ်းကို ပြောင်းလဲရန်က ပို၍ခက်ခဲမည် ဖြစ်သည်။ နားလည်လက်ခံနိုင်ရန် စိတ်နှလုံးသားတစ်ခုသာ လိုအပ်မည် ထင်သည်။
Design History တစ်ချို့ကို ယခင် ကျောင်းသားသက်တမ်းတစ်လျှောက် လေ့လာဖူးခဲ့သည်။ Structural Design History, Architectural Design History, Landscape Architectural Design History နှင့် Interior Design History စသည်ဖြင့် ဒီဇိုင်းသမိုင်းတို့သည် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းလွန်းလှသည်။ မတူညီသော ပညာရပ်တို့သည် ခေတ်တစ်ခုနှင့် တစ်ခု ဆက်စပ်ပြောင်းလဲလာခဲ့ခြင်းကို လေ့လာရခြင်းသည် ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းသည်။ ယခု Sustainable Design History သည်လည်း အခြား Design History များနှင့်အတူ လိုက်ပါပြောင်းလဲနေခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ သတိမထားမိခဲ့ခြင်းနှင့် မသိနားမလည်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သာ အစိမ်းသက်သက် ဘာသာရပ်တစ်ခုအဖြစ် ထင်မှတ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ စင်စစ် ထိုသမိုင်းသည် ကျွန်တော်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလိုက်သင့် ပြောင်းလဲနေခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။
Sustainable Design History သည် မျိုးဆက်ငါးခုအဖြစ် ပြောင်းလဲလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အထက်မြင့် အဆောက်အဦးများ၏ ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲလာပုံကို sustainable point of view မှ Five Energy Generation အဖြစ် Prof. Philip Old field, Prof. Dario Trabucco နှင့် Prof. Anotny Wood တို့က သုတေသန ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပထမမျိုးဆက် အထက်မြင့် အဆောက်အဦးများသည် 1885-1916 ခုနှစ်အတွင်းတွင် New York မြို့တော်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ပထမမျိုးဆက် အဆောက်အဦးများတွင် Facade transparency သည် overall envolope ၏ 20% မှ 30% အထိသာ ရှိပြီး အများဆုံး 40% အထိသာ ရရှိခဲ့သည်။ အုတ်နံရံများကို အများဆုံး အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး Central Air-well များနှင့် Atrium များသည် သဘာဝအလင်းနှင့် လေ၀င်လေထွက်အတွက် အဓိကဖြစ်စေခဲ့သည်။ ထက်အောက် ဆက်သွယ်ပေးသော ဓါတ်လှေကားနှင့် လှေကားများကို ဗဟိုတွင်ထားလေ့ရှိပြီး အဆောက်အဦး Layout Plan များသည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့် ထူးခြားဆန်းပြားခြင်းလည်း မရှိခဲ့ပေ။ Large Volume / Small Facade Area Design များဖြစ်သည်။ 22 - 43 lux^5 artificial lighting level, load bearing technology, external wall, masonry construction, dense and solid facade စသည်တို့သည် 1st Energy Generation Tall Building တို့အတွက် အဓိက အချက်များ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံများသည် 1st Generation ၏ Typical Layout နှင့် သမိုင်းတွင် ထင်ရှားသော အဆောက်အဦးတစ်ချို့ဖြစ်သည်။
*The Equitable Building in NYC, the E.V.Haughwout Building in NYC, 90 West Street in NYC.
* the Municipal Building in NYC, William Le Baron Jenney in Chicago, Marshall Field and Company Store in Chicago.
*Chamber of Commerce in Chicago, Lloyds of London, Commerzbannk in Frankfurt.
ဒုတိယ မျိုးဆက် အဆောက်အဦးများသည် New York City ရှိ The Equitable Building Design အပေါ်တွင် မူတည်၍ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် building envelope surface area နှင့် အဆောက်အဦး၏ volume အချိုးပြောင်းလဲမှုသည် အခရာကျခဲ့သည်။ Facade Transparency သည် ထူးထူးခြားခြား မပြောင်းလဲခဲ့သောလည်း Envelope Surface area to volume ratio သည် သဘာဝအလင်းရရှိစေရန် များစွာပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ လေးထောင့်ကျကျ အဆောက်အဦးများသည် သွယ်လျလာခြဲ့ပီး အဆောက်အဦးထိပ်ပိုင်း ဧရိယာသည် အောက်ခြေဧရိယာထက် လျော့နည်းလာသည်။ မြို့ပြဒီဇိုင်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး အထက်မြင့် အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းများသည် ထိုအဆောက်အဦးအတွင်းအား အသုံးပြုမည့်သူများအတွက်သာမက၊ လမ်းသွားလမ်းလာ ပြည်သူလူထုအတွက် လေးလေးနက်နက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာကြသည်။ နည်းပညာတိုးတက်မှုအပေါ်မူတည်၍ လျှပ်စစ်အလင်းဓါတ်ကို 1903 ခုနှစ်မှစတင်ပြီး 269 lux^5 ရရှိအောင် ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ Air-condition များအား ရုံးအဆောက်အဦးများတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာခဲ့သော ခေတ်လည်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံများသည် 2nd Generation ၏ ပြောင်းလဲမှုနှင့် သမိုင်းတွင် ထင်ရှားသော အဆောက်အဦးတစ်ချို့ဖြစ်သည်။
* Chrysler Building in NYC, 500 - 5th Avenue in NYC, 570 Lexington Avenue in NYC.
* Milam Building in San Antonio, Chicago Tribune Tower with different competitor.
* Palmolive Building in Chicago, Carew Tower in Cincinnati, Commerce Court North in Toronto.
တတိယမျိုးဆက် အဆောက်အဦးများတွင်တော့ သမရိုးကျ ဒီဇိုင်းများမှ ဖောက်ထွက်လာခဲ့သည်။ Paradigm shift ဖြစ်လာခဲ့သော ယခုမျိုးဆက်တွင် Glazed Curtain Wall များကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အလွန်အထက်မြင့်ဖြစ်သော အဆောက်အဦးများစွာ ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီး အမြင့်၏ 50% မှ 70% အကြား နေရာများသည် အဆောက်အဦးတို့အတွက် fashionable icon များအဖြစ် ဖန်တီးလာခဲ့ကြသည်။ ဗိသုကာများစွာသည် Black Skycraper များအား ရင်ခုန်လှိုက်မောစွာ ဖန်တီးရင်း New York မှသည် Chicago, Toronto, Paris, Tokyo စသည်ဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ international style အဖြစ် ကျော်ကြားစေခဲ့သည်။ Glazed Curtain Wall Design ကြောင့် building layout plan များသည် ဒုတိယမျိုးဆက် အဆောက်အဦးများနှင့် ခြားနားစွာ ပြောင်းလဲလာခဲ့စေခဲ့ပြိး deep layout plan နှင့် typical passage way များကို အသုံးပြုလာခဲ့ကြသည်။ လျှပ်စစ်အလင်းဓါတ်ကို အသုံးပြုမှုသည် 1076-1615 lux အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ Air condition များကို နေရာအနှံအပြားတွင် တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာခဲ့သော ခေတ်လည်း ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံများသည် ထင်ရှားသော 3rd Generation အဆောက်အဦးတစ်ချို့ဖြစ်သည်။
* The Lever House in NYC, Dominion Bank Tower in Toronto, Lake Shore Drive Apartment in Chicago.
* City National Tower in Los Angels, Seagram Building in NYC, Shinjuku Mitsui Building in Tokyo.
စတုတ္ထမျိုးဆက် အဆောက်အဦးများကို 1973 ခုနှစ်မှ စတင်၍ တည်ဆောက်လာခဲ့ကြသည်။ Glazing technology တိုးတက်မှုသည် Double Glazed Curtain Wall Facade များကို ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီး Facade Transparency သည် 100% အထိ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ တစ်ဖက်တွင်လည်း လျှပ်စစ်အလင်းဓါတ် အသုံးပြုမှုကို စတင်လျှော့ချလာခဲ့ကြသည်။ Building layout များသည် ထူးခြားဆန်းပြားလာခဲ့ပြိး Compact ဖြစ်လာခဲ့သည်။ Black Skyscraper ဒီဇိုင်းများကို ရိုးအီလာကြပြီး ဖန်တီးမှုအသစ်များနှင့် Organic Building Design များအပေါ် ရင်ခုန်သံမြန်လာခဲ့ကြသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လေ့လာသူများ၏ Energy Crisis အပေါ် ထားရှိသော သဘောထားများ လေ့လာမှုများကို အလေးထားလာခဲ့ကြသည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံများသည် ထင်ရှားသော 4th Generation အဆောက်အဦးတစ်ချို့ဖြစ်သည်။
*Wells Fargo Plaza in Houston, One Canada Square in London, Cheung Kong Center in Hong Kong.
နောက်ဆုံးမျိုးဆက်တွင်တော့ အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းများသည် slender shape များ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ပထမမျိုးဆက်နှင့် ခြားနားစွာ small volumn နှင့် large facade area အဖြစ်ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြသည်။ သဘာဝအလင်းနှင့် လေ၀င်လေထွက်ရရှိအောင် ပိုမိုကြိုးပမ်းလာကြပြီး double skin facade များ၊ triple skin facade များကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုလာကြသည်။ Solar ပစ္စည်းများကို နေရာအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုလာခဲ့ကြပြီး လောင်စာဆီအပေါ် မှီခိုနေသော energy usage များအပေါ် လျော့ချလာကြသည်။ Mix use of technology နှင့် Low & Zero Carbon sources များသည် အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းအသစ်များကို စိန်ခေါ်လာခဲ့သည်။ အဆောက်အဦး Layout များတွင် Local climate ကိုသာမကပဲ Micro climate အတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလာကြသည်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံများသည် ထင်ရှားသော 5th Generation အဆောက်အဦးတစ်ချို့ ဖြစ်သည်။ 1996 ခုနှစ်တွင် Architect Foster က ပထမမျိုးဆက် အထက်မြင့် အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်၍ Frankfurt ရှိ Commerzbank အဆောက်အဦးကို ဖန်တီးခဲ့ရာ ထိုအဆောက်အဦးသည် Sustainable tall building history အတွက် စံနမူတစ်ခုအဖြစ် လေ့လာသင့်သော အဆောက်အဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
*WeCommerzbank Tower in Frankfurt, Bank of America Tower in NYC, Bahrain World Trade Center in Manama.
* Pearl River Tower in Guangzhou, Lighthouse Tower in Dubai, Castle House in London.
*4Times Square in NYC, Deutsche Post Tower in Bonn, GSW Headquater in Berlin.
နေရာ၊ ကာလ၊ ဒေသ၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လှုမှုရေးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်၍ အထက်မြင့် အဆောက်အဦးများ၏ ဒီဇိုင်းသည် အမျိုးမျိုး ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ Prof. Philip Old field, Prof. Dario Trabucco နှင့် Prof. Anotny Wood တို့၏ Five Energy Generation of Tall Buildings သုတေသနသည် အထက်မြင့် အဆောက်အဦးဒီဇိုင်းများ energy use အတွက် ပြောင်းလဲလာပုံကို အဓိကထား လေ့လာထားခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့် လေ့လာလျှင်
၁။ မည်သည့် အဆောက်အဦးများကို အထက်မြင့် အဆောက်အဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသနည်း။
၂။ Energy Use တစ်ခုတည်းတွင်သာမကပဲ မည်သည့် အချက်များသည် အထက်မြင့် အဆောက်အဦးများကို အဓိက ပြောင်းလဲစေခဲ့သနည်း။
၃။ မည်သည့် အချက်များသည် အထက်မြင့် အဆောက်အဦးများအပေါ် လူထုစိတ်ဝင်စားမှုအား လျော့နည်းစေခဲ့ပါသနည်း။
၄။ မည်သည့် အချက်များသည် အထက်မြင့် အဆောက်အဦး၏ ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုကို ဆက်လက်ဖန်တီးနေပါသနည်း။
ဤ topic လေးသည် Prof. Philip Old field, Prof. Dario Trabucco နှင့် Prof. Anotny Wood တို့၏ "Five Energy Generation of Tall Buildings" ဆောင်းပါးလေးကို ကိုးကားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ Reference image များကိုတော့ Google ကနေပဲ research လုပ်ထားပါသည်။
အကယ်၍ သင်သာ Instagram Apps ကို နှစ်လိုစွာ အသုံးပြုသူတစ်ဦးဖြစ်လျှင် Building lovers တစ်ချို့၏ photo များကို ကြည့်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းလိုသည်။ ဖော်ပြပါပုံများအား IGER အများစု၏ photo များကို စုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by ဂျွန်မိုးအိမ် Labels: Sustainable Building Design
much knowledge about sustainable because of reading ur blog...
I just start to learn this course, hopefully I may write some post about this topic at future.. :D